Vaovao - Fampiharana tombony amin'ny gasket aluminium foil
Fampiharana tombony azo avy amin'ny gasket aluminium
Aluminium foil gasket dia vita amin'ny aliminioma aorian'ny fanerena ary avy eo dia natao araka ny tanjona samihafa. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny fonosana sasany mba hampisarahana ny rivotra sy hanitarana ny andian'ny vokatra. Ka inona ny tombony azo avy amin'ny gasket aluminium foil? ?
Voalohany indrindra, ny gasket aluminium foil dia tsy misy poizina ary tsy misy tsirony ao amin'ity faritany ity. Ankoatr'izay dia manana fahaizan'ny bakteria tsara izy io. Amin'ny ankapobeny, ny zavamiaina bitika dia tsy afaka maniry eo amboniny, ka madio ny tampony ary tombony hafa, ka matetika io no ampiasaina amin'ny sakafo. Ao anaty fonosana; etsy ankilany, ny gasket aluminium foil dia tsy manjary koa, ka misy vokany miaro tsara amin'ny vokatra mora tohina amin'ny tara-masoandro; tsy izany ihany fa ilaina ihany koa ho an'ny fanokafana mora azy rehefa ampiasaina amin'ny fonosana vokatra. Ary ny tanjaka keliny kokoa koa dia mety ho tena mora ilain'ny mpanjifa manokatra; noho izany dia fitaovana fonosana avo lenta izay mampifangaro ny hatsarana, ny maha-azo ampiharina ary ny fampiasana azy io.
Ny gasket aluminium foil dia tsy misy poizina rehefa nafanaina, satria ny gasket aluminium foil dia fitaovana nohomboana mafana izay mihodina mivantana ho ravina manify misy alimoam-by. Ny vokany nohitsakitsahana mafana dia mitovy amin'ny volafotsy volafotsy madio, ka antsoina koa hoe foil volafotsy sandoka. Satria ny aliminioma dia manana endrika malefaka, fahalefahana tsara ary famirapiratana volafotsy-fotsy, raha ny taratasy mihorona dia apetaka amin'ny taratasy offset misy silicate sodium sy fitaovana hafa hanaovana foil aluminium, dia azo atao pirinty ihany koa. Na izany aza, ny volam-bolan'ny aliminioma dia mora mihosina ary manjary maizina ny lokony, ary ho levona ny loko rehefa kosehina na kasihana, noho izany dia tsy mety amin'ny fametahana mafana ny firaketan'ireo boky sy fizarana boky izay voatahiry mandritra ny fotoana maharitra.
Mazava ho azy, tsy vitan'ny hoe manana tombony miavaka amin'ny indostrian'ny fonosana izy io, fa manana sanda fampiharana lehibe amin'ny indostria hafa.